5 Zvinhu Zvokutaura kumuyeuchidza He Inoda You
Zviri chaizvo nyore chaizvo kutaura zvinhu zvinoratidza mukomana iwe hanya uye asi, kunyanya yakareba ukama apo isu kutora mukomana tiri pamwe zvokutamba, tinowanzotevedzera kwete. Mostly nokuti ukama yakareba isu sokuti tiri kare nemasaini rudo pachena kwakadaro uye kusvikira kumwero kuti zvimwe ichokwadi nokuti imi muri achinyatsoita mudiwa wako. Asi umwe zvino uye ipapo zvishoma, understated zvinhu unogona kutaura kuti kukuratidza hanya uye kumuyeuchidza kuti anofanira iwe sezvaakanga zvikuru sezvaakaita mumazuva okutanga uye zvakatonyanya kudaro.
Mameseji A Nice Message
Kana ari kubasa, iri nyore “Tariro zuva rako chinoenda zvakanaka” panguva yokudya kwemasikati-kwemasikati raizova nzira zvakanakisa yokuratidza rudo. Zvinoratidza uri kufunga nezvake uye kuti une hanya. Hazvina chokwadi kuti iye kunyemwerera.
Vachiti zvakafanana “Iva nezuva rakanaka!” kana “Zvichengetedze” kana vari munzira yavo vakabuda vachakuratidza hanya. Haufaniri kutsvoda kana kwete ndicho chinhu chaunoita somunhu akaonekana navo kukwazisa kakawanda zvazvo ndine chokwadi zvaizova chaizvo zvakare.
Ratidza An Interest
Chinhu kuti vanhu vanoda mune mumwe munhu anoteerera nokuti inoratidza kuti unovafarira somunhu. Asi kazhinji munhu haazvizivi kuti munhu vari anoita kufarira navo zvavanofarira saka kuratidza kuti zvaunoita. Just nyore inodonha ndokuadira kukurukura zvakareruka. zvakafanana, “Kuti ratidza waunoda ari manheru ano” anoratidza imi regai kuteerera.
Iti Chimwe Positive
Kutonga zvaunotaura pane zvaunofunga kuti kuti vafare. Saka somuenzaniso kana anoridza gitare kumuudza ari kutamba nevaya zvakanaka, kana ari mukati fashoni kumuudza anotarira zvakanaka kana zvaanoda mumhanzi kumuzivisa iye ruzivo chaizvo pamusoro mumhanzi. Dzimwe nguva tose hove kuti sarabenzi kuzadzikisa.
A yakawanda vakaroorana haatauri izvozvo kakawanda pavanenge achinyatsoita munhu. Neimwe nzira rudo zvakajeka ikoko uye zvimwe haadi kuti vati dzose nguva asi ose zvino uye zvakare kuvayeuchidza kuti zvaunoita.